Recent Activity – Burmese Women's Union
In June, BWU organized Pre-Meetings/Consultationsavillage in Loi Kaw, Kayah state and in two villages in the Hinthrda Township, Ayeryarwaddy region, to meet the local people and learn more about their situation. NLD members, CSOs, the chair of the village, local administrators, youth groups and women’s leaders joined the discussion. At the meeting our staffed shared information about the NCA, 21st Century Panglone Peace Conference. The local people also laid out their expectations for the peace process in the country and shared their daily experiences and struggles.
Also in June, Under the Capacity Building program, BWU organized Gender and Economics Training in Yangon. Thirteen women from Pegu, Ayeyarwaddy, Mon nd Kayah State participated in the training. The goal of the workshop was to raise awareness on the CEDAW and to educate women on the economic situation in Burma, how it effects women and what they can do to improve their situation and become more financially independent.
ရေကြည်ရာမြက်နုရာရှာဖွေရင်း လမ်းပျောက်ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ January 19, 2022
“ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် ပိုသွားကြတာ။ ကျေးရွာတွေကိုဆင်းတော့ ပြည်ပကိုထွက်ဖို့ စိတ်အားထိုက်သန်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ ဟိုဖက်က ဘာအခြေအနေလဲဆိုတာ မသိကြဘူး။ ကျောင်းတွေကိုနားကြ လမ်း စရိတ်အတွက်ရှိတာရောင်းပြီး သွားနေကြတာ အများကြီးတွေ့ရတယ်”
ဖိနှိပ်ခံထားရပေမယ့် ကျိုးကြေမသွားတဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ January 18, 2022
“စစ်မေးတဲ့အခါမှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနှိပ်စက်ညှင်းပန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဝါယာကြိုးတွေနဲ့ ရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိ တယ်”
လူမျိုးရေးခရောင်းလမ်းထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာဖွေနေသူ January 17, 2022
“ကျမရဲ့ စကားဝိုင်းထဲကို ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဟိုး….ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ ပါလာတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပဋိပက္ခနောက်ပိုင်းမှာ ကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကို အခေါ်အပြောမရှိဘူး။ ကျမစီစဉ်တဲ့ စကားဝိုင်းကပဲ သူတို့တွေ ပြန်ပြီးတော့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ပြန်ရသွားကြတယ်”
နိုင်ရာတာဝန်ဆက်ထမ်းချင်တဲ့ CDM နွေဦးမိခင် January 14, 2022
" ကျွန်မတို့က ဘယ်သူ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့် ဒီအထဲရောက်လာတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကို ရောက် လာကြတာ။ အဲတော့အောင်ပွဲရတဲ့အထိ ဆက်ပြီးတောင့်ခံသွားဖို့ပဲရှိပါတယ်"
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့လုယက်မှုတွေ January 12, 2022
“အခုဆိုညဘက်ဘယ်မှမသွားရဲတော့ဘူး။ နေ့ခင်းအော်ဒါတွေပဲ ပို့ပေးတော့တယ်။ လူပြတ်တဲ့နေရာတွေ မသွားဘူး။လမ်း မကြီးတွေကပဲ မောင်းတယ်။ အဲ့ဒါလည်း မလုံခြုံပါဘူး။ စစ်သားရန်ကရှိသေးတယ်”